प्रकाश सपुतले गल्ती नसच्याए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गायक शम्भु राइकाे चेतावनी…..(भिडियो सहित) « Onlinetvnepal.com
प्रकाश सपुतले गल्ती नसच्याए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गायक शम्भु राइकाे चेतावनी…..(भिडियो सहित)
Published : 20 June, 2019 10:40 am
चर्चित गायक शम्भु राइले आफूलाई सिध्याउने खेल भएकाे खुलासा गरेका छन् । चाेरहरू मालिक बन्ने र वास्तविक स्रषटालाई चाेर बनाउन खाेजिएकाे प्रति राेष प्रकट गर्दै आफूलाई सक्काउने खेल सुरू भएकाे बताएका छन् । उनले ओटिभि युट्युब च्यानललाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा यस्ताे खुलासा गरेका हुन् ।
नेपाली गीत संगीत क्षेत्रमा यतिबेला प्रकाश सपुतकाे ‘गलबन्दीमय’ले चर्चा पाएसँगै विवादित पनि उत्तिकै बनेकाे हाे । यस गीतमा भाका चाेरी भएकाे भन्दै गीतकार राइ निकै आक्राेशित रहेकाे पाइन्छ । प्रकाश सपुतले गल्ती नसच्याए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चतावनी गायक राईले दिएका छन् । उनले आफ्नाे छातिमाथि बुट बजारेर, सांस्कृतिक हस्तक्षेप गरेकाे समेत आराेप लगाएका छन् । उनी भन्छन् ‘एकदुईवटा लय चाेरी भयाे भनेर मैले मेरा लागि बाेलेकाे हाेइन, यसले मलाई खास फरक पार्दैन तर आम स्रष्टामाथि अन्याय भएकाे छ, धेरैका गीत चाेरी भएका छन् त्यसकाे लागि भएपनि मैले बाेल्नैपर्छ ।’ प्रकाश सपुतलाई त्यत्तिकै छाेड्दा आफू चाेर हुने अवस्था आउने भएकाेले पनि न्याय माग्न थालेकाे बताएका छन् ।
चर्चित गायक शम्भु राईकाे २०४७/४८ सालतिर रेकर्ड भएकाे देउसी भैलाे गीत सँग भाका मिलेपछि निकै विवाद सिर्जना भएकाे हाे । आफ्नो गीतको भाका नक्कल गरेर प्रकाश सपुतले ‘गलबन्दी’ बनाएको भन्दै आक्राेसित बनेका छन् । उनले प्रकाशलाई चाेर त भनेन तर गीतकाे भाका चाहीँ आफ्नै रहेकाे बताएका छन् । उनले भने ‘संयाेग, प्रभाव, या नियत के हाे ? संयाेग हाे भने त्यसलाई समाधान गर्नु पर्याे, प्रभाव हाे भने त्यही अनुसारकाे कुरा गर्नु पर्याे हैन नियत हाे भने कस्ताे नियत हाे ? मलाई सिध्याउने हाे कि ? हामी पुराना स्रष्टा चाही चाेर हुने नयाँ स्रष्टा चाहीँ त्यसकाे मालिक हुने अवस्था आयाे भाेलि उहाँका गीत पनि त्यस्तै नहाेला भन्न सकिन्न ।’
उनले अझै थपे भाका मिलेकाे छ, जग त्यही हाे । बिट त्यही हाे अलिकति बङ्ग्याएर बनाइएकाे छ । मेराे अलि साेलाे छ । उहाँकाेमा फरक पार्नु भएकाे छ । फास्ट छ । हेर्ने दर्शक श्राेताकाे चहाना अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हाे । भाेलि याे भन्दा पनि फास्ट बन्दै जाला । भाेलि अर्काेले पनि मेरै हाे भनेर गाउँला । प्रकाश सपुत र शान्ति श्री परियारको आवाजमा रहेकाे यो गीतले छोटाे समयमै युट्युब च्यानलमा एक करोड भ्यूजको पुर्याएकाे छ । यसमा प्रकाश सपुतसँगै अञ्जली अधिकारीले अभिनय गरेकी छिन् । शम्भु राईलाई कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियाे धैर्यताका साथ अन्तसम्म हेरिदिनु हाेला । धन्यवाद !